Siwiizerlaanditti yaaliin laakkofsa baqattootaa woggatti 0.2% akka hincaalle godhuuf qiyyaafate fashale - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Siwiizerlaanditti yaaliin laakkofsa baqattootaa woggatti 0.2% akka hincaalle godhuuf qiyyaafate fashale
Biyya Siwiizerlaanditti filannoon geggeeffamee ture; dhimma laakkofsa baqattoota gara biyya saniitti koolugaltummaa gaafatan daangessuu irratti. Yaanni filannoof dhihaate woggaa woggatti baqataan gara Siwiizerlaand seenan 0.2% ummata biyyattii caaluu qaba moo hinqabu isa jedhu irratti ture.
Yaaliin laakkofsa koolugatoota woggatti seenan 0.2% tti daangessuuf godhame fashalee jira. Gareen baqataan heddu akka Siwiizerlaand hinseenne fedhan moo’atan osoo ta’ee laakkofsi baqataa biyya san woggatti seenu 80,000 (yeroo amma) irraa gara 16,000 gadi bu’a ture. Jiraattota Siwiizerlaand keessaa 16% namoota dhalootaan biyya biraa irraa dhufaniidha.
Yaaliin laakkofsa baqataa daangessuuf godhame sagalee filattootaa 74% kufe. Kunis hedduuf raajii hinturre. Sababni isaas guyyaa filmaataa dura yaanni xiinxallitootaa fi qorannoon addaddaas kanuma akeekaa waan tureef. Deeggartoonni yaada kanaa kanniin shakkii fi sodaa biyyattiin koolugaltootaan dhiphachuuf deemti jedhu qabaniidha.Yaanni kuni rakkoo jibbaa sanyii fi rakkoo diinagdee ufkessaa qaba jechuudhaan paartileen siyaasaa biyyattii gurguddoon hunduu mormanii jiru.
Previous articleManni murtii Kaayiroo himannaa perezidaantii duraanii Hosnii Mubaarak irratti dhihaate kuffise
Next articleAllaattiin basaastuu Taalibaan jedhamte Afgaanistaan keessatti rukutamte